फोटो फिचर : तरकारी किलोमा किन्ने कि तोलामा ! | eAdarsha.com
फोटो फिचर : तरकारी किलोमा किन्ने कि तोलामा !
अदुवा प्रति केजी रु ३००, काउली रु १५०, टमाटर रु ११०
भारतीय तरकारीमा विषादी तथा सिमामा विषादी जाँच गरेपछि मात्र तरकारी देश भित्रिन थाले पश्चात तरकारीको भाउ अकाशिएको छ । शुक्रबार बेलुकी ७ बजे पोखराको बिपी चोक स्थित सडकपेटीमा अदुवा प्रति केजी रु ३००, काउली रु १५०, टमाटर रु ११० तथा साग प्रति मुठा ७० मा बिक्री भइरहेको थियो । बन्दा तथा रुख कटहरको भाउ भने स्थिर रहेको छ । यि दुबै प्रति केजी रु ७० देखि रु ८० प्रति केजीमा बिक्री भइरहेका छन् । तस्विरहरुमा हेर्नुहोस् बेलुकीको तरकारी व्यापार ।